Tags : SFY မှ အညာသူ Sis and အညာသား Bro များအတွက် (အသားမဲပေမဲ့စိတ်ကလည်းမဖြူဘူး)...
By : sweetorchid on Mar 3, 2010
Score: 120 Rating: 5.00 Comments: 38
Orchid ကအညာသူလေးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ သက်ဆိုင်သူကမန္တလေးမှာမွေးပြီးအညာ အစားအစာကိုအရမ်းကြိုက်တဲ့(အသားအလွန်မဲ) တဲ့သူလေ...ဒီသီချင်းလေးက သူအပါအ၀င် SFY မှာရှိတဲ့ အညာသူအညာသား Sis and Broအားလုံးအတွက်ဆိုထားတာပါရှင့်... တကယ်လည်းဆိုရင်း Orchid လည်းအညာ ကိုလွမ်းသွားတယ်ရှင်...Description လေးကိုရှည်အောင်ရေးထားတာသီချင်းလေးကရှည်လို့လေ...ဟဟ...ပြီးအောင်အားပေးနော် အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ပိတ်ရက်မှအားလုံးကိုအား ပေးပါ့မယ်ရှင်...Orchid ရဲ့ Holiday2Months က ကုန်သွားပြီရှင့်... SFY မှာအမြဲနေလို့မရတော့လို့လွမ်းတယ်ရှင့်....
mayangel on Mar 6, 2010 0
now orchid laeanyar t(h)u pae pawt... after anyar t(h)ar nae phoo sar son pii tawt lay :) sing htar tar so nice payanyar t(h)u lay yay.... thanks so much for your song par ..... sing more naw R+1.......
paradise on Mar 5, 2010 0
ha ha ha....description lay ka dortayan lan dal kwar...so htar tar ka lal...great.........Rbalck gyi yay......kyar dal naw...:P
sweetorchid on Mar 6, 2010 0
ကျေးဇူးနော် Sis Para yae...
zezawar on Mar 4, 2010 0
naymin15 on Mar 4, 2010 0
ဆိုထားကကောင်းလှပါတယ်...အသံနဲ့ဆိုပုံကလည်းကောင်းး သီချင်းလေးကလည်းကောင်းဆိုတော့ လုံးဝကိုအားပေးသွားပါတယ်.. အညာသူကြီးပေါ့..လာလည်မယ်နော်... ထန်းရည်တော့တိုက်ကွယ်..အဘကြိုက်လို့ပါ 5************:))အဆုံးထိကောင်းပါတယ်ဗျာ..
ဟားဟား... Black and White လားအစ်မ... အလုပ်မှာ အဆင်ပြေပါစေဗျ....
forevermoe on Mar 4, 2010 0
shwe nyar thu lay ka so htar tar cho cho layy ..listen lo kg tal sis orchid yay ...arr pay twer par tal shinn..***********************
seven on Mar 4, 2010 0
~~အင်းး...အနီးစပ်ဆုံးရန်သူက..ပိုပြီးကြောက်ရတယ်တဲ့ .. ခိုင်လုံတဲ့ သီတင်းရပ်ကွက်က..ကြားရတာတော့.. Orchidက..ရန်ဖြစ်လို့ စိတ်ဆိုးရင်..နေပူထုတ်လှမ်းတတ်လို့ .. မဲသွားရတာပါတဲ့ ..နဂို..အဖြူထည်လေးပါတဲ့..းD.. ဘာပဲပြောပြောသီချင်းလေးဆိုသွားတာတော့..နားထောင်လို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်...အားပေးသွားတယ်နော်.. *****************************!!~~..
kyar hte ka nay....a thar nay naw....ma nay tat yin bar pyit tal te'...:D Ye Baw Tha Ti :P
sweetorchid on Mar 5, 2010 0
ဟုတ်ပ အညာသားတွေ ကအသားမဲပီး စိတ်ကလဲမဖြူဘူးနော်..:D မဆွိ ဆိုသွားတာ တအားကောင်းတယ်တကယ်..ဒါမျိုးလေးတွေ ဆိုလဲ အမကကောင်းနေတာပဲရော...*****
အစအဆုံး နားထောင်အားပေးသွားပါတယ် ညီမရေ ... အရမ်းကို နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ် ... *****
ရှယ်ပဲ sis Orchid ရေ ... love it ... 5*
sis ရဲ့သက်ဆိုင်သူက မန္တလေးသားဆိုတော့ I နဲ့ နယ်သားတွေ ပေါ့..ဒါပေမယ့် I ကတော့အသားသိပ်မမဲဘူးနော်..ဟိဟိ...... သီချင်းလေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်သွားပါတယ်..ဆိုထားတာ အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်..sis ကိုလည်း sfy ကညီအ ကိုမောင်နှမတွေကလွမ်းနေမှာပါ...5************
athan cho cho lay nae.......kg lite tar........sis lay......*******
wow... classicaso ka lae shal bae .... love it ....ayan kg tel sis orchid yay ....****************************
a yan kg par tal...5**********
sis ka taw thu anyar tu hote fu :DD mama yay so twar tar ayan kg par tal shint :)))************
liontun on Mar 3, 2010 0
song lay so htar tar so nice par byar ************
..__.................__......______........_____...........___________................................... ..##...............##.....#####.....######.......#########.................................... ..###.............##........##......##..........##....##..................................................... ..##.##.........##........##......##...................#####.............................................. ..##...##......##........##......##...................#####............................................... ..##.....##...##........##........##.................##....................................................... ..##.......####........##..........##........##..##########.................................... ..##...........##.....#####..........####......##########..................................... ..---.............---......---------............-----..................................................................... ပါဖက်ပါပဲ ...... အသံ ရော အဆိုရော လန်ထွက်နေတာပဲ ... ...ကောင်းပေစွ..... ကောင်းပေစွ ..... ၅စတားစ်ပေးမှ ဖြစ်မယ် .... :P:):D
good shel par pae sis yae.... classical song lay ko pying pying naing naing thi so thwar tar good shel par pae... *************** for u!!! :)))))
koaungkhaing on Mar 3, 2010 0
သစ်ခွချိုလေးရေ... နားထောင်ရတာ သိပ်အရသာရှိပါတယ်ကွယ်.. ဦးလဲဆိုချင်တာ.. ဘယ်လိုမှ ယောက်ျားသံနဲ့ မလိုက်လို့..(ကျုပ်တို့မြေကိုလာလည် ဘိတ်ချင်သူ..ခင်ဗျ)လို့ဆိုရမယ်ထင်တယ်..
sweetorchid on Mar 3, 2010 0
ဆိုပါ ဦး ရေ ဘာမှမဖြစ်ဘူးအားပေးမယ်...ရှင့်...
punttatkaya on Mar 3, 2010 0
wow kg tel ...ayan mite tel ama...:clap..:Clap..:clap
yan kg lite tar.......:clap.....sweetorchid lay yae....arr pay twar tal nor......
pp01 on Mar 3, 2010 0
Sis lay yay.. thet kg tal..lwon sa yar lay nawt.. kyite tal..athan lay lae kg tal.. aso lay lae kg tal:D*****
har....mite te kwar......song lay ko nar sin ya tar....a nyar tuanyar tarr.......tayakyaung ko kaw...a nyar day taakyaung ko par sone lin swar ti ya par te....aw......."atarr mel pay mel...a thel ka tot phyu mar par" sis yay..aheeeeeeeeeeee:))))))))))))) tawtaw lay nar htaung ya tarasin pyay hla kyaung par......a nyar tarrr g yelz tat saing tu mama yay..>>>>>
Sis lay susann yae kyaezu tin thal nyima yae... အသည်း ဖြူပေမဲ့ လိမ်တတ်တယ်... ဟဟ
Sis orchid layy yay...Bro gyii RPG pyaw talo par palzzz...clasic song lay ne po lite tal....so hann layy yaw chit bo ta arr kg par tal...request par....classic song lay 1pote laut so par ohn norr..*********************myarr gyi payy ke par tal shint:)bravvooooooo sis!
Sis Whitekisslay အတွက် Classic Song လေး တစ်ပုတ်ဆိုပေးမယ်နော် ...
Heyyy.. I like this songalot too.... Myuu Myuu Lay Naet. So Htar Dar Kg Hma Kg ************!
..မြတ်ရေ..ဒီသီချင်းလေးကို ဆိုသွားတာ အရမ်းကိုကောင်း ပါတယ်...:)))))))))))))))..Luv it..:)))))))...အညာတောင်ပြန် ချင်လာပြီ..:(((((((((((...လိုအပ်ချက်မရှိအောင်ကို ကောင်း တယ်...ဒါပေမဲ့ ..တနဲ့သနဲ့ တော့ကွဲသေးဘူး..:P:P:P ...Luv*********************************************** **..for..Orchid lay yay...:))))))))))..............RPG....
မပီတာကိုလူသိအောင်လုပ်လို့..မနက်ဖြန်ကို... ကို ထမင်းအိုးတည်အလှည့်ကျပါတယ်ရှင့်...